Ikhilikithi ngumdlalo wakudala ohlekisayo | Scrolla Izindaba
Ikhilikithi ngumdlalo wakudala ohlekisayo
Abasekeli bamaProtea abathembekile kuphela abazokuphika ukuthi amaProteas anamathuba amancane okunqoba ekuhlolweni kwesibili e-Rawalpindi uma bedlala nePakistan kusasa.
Kepha into enhle ngekhilikithi, ukuthi imvamisa ihlula okusobala nokunengqondo.
Ngakho-ke kuphephile ukusho izinto ezifana nokuthi “ikhilikithi ngumdlalo wakudala ohlekisayo” nokuthi “kungenzeka noma yini.”
Abathembekile bazokhumbuza labo abangabazayo, ukuthi iPakistan isike yathola uchungechunge lokwehlula iNingizimu Afrika (ngowe-2003) kanti iNingizimu Afrika isishaye iPakistan amahlandla ayisithupha, okumele ngabe bayizintandokazi, kodwa akunjalo.
Ngesikhathi uNauman Ali noYasir Shah bebhubhisa abashayi bebhola baseNingizimu Afrika ngesonto eledlule, bekucaca ukuthi iNingizimu Afrika ayazi ukuthi idlalwa kanjani i-spin, kanti futhi izinkundla ezikhohlisayo zakulelazwe azenzi kube lula kumaProteas.
Ngaphezu kwalokho, akukho okukhombisa ukuthi kube noshintsho oluthile kunoma yiliphi iqembu – iPakistan ngezizathu ezifanele (uma kungaphuliwe ungakulungisi) nasekhempini yaseNingizimu Afrika ngazo zonke izizathu ezingalungile.
Kepha kukhona ithemba. Ukuhlasela okunamandla (kukaNgidi, uRabada noLinde uma edlala) amaProteas enze kahle emdlalweni owedlule.
Mhlawumbe kusho ukuthi iPakistan inenkinga ngejubane njengoba amaProteas enenkinga nge-spin. Uma abashaya ibhola labo esibaziyo bengathola ama-runs (uElgar, uVan der Dussen, uMarkram, uDu Plessis, uDe Kock, noBavuma onesibindi) bezimisela, ikakhulukazi uma bebhekene nebhola elisha, bangaphendula amatafula kubaphosi abasheshayo basePakistan. Lokho kuzobeka ingcindezi ebidingeka kakhulu kubavuli bePakistan, kubaphoqe ukuthi bathathe amashansi.
Futhi-ke, ikhilikithi, njengoba sonke sazi, ngumdlalo wakudala ohlekisayo futhi noma yini ingenzeka.
Umthombo wesithombe: @therealPCB